China Dehydrated Mkpụrụ Dice emepụta na suppliers | Ihe nketa
Heritage mkpụrụ osisi dais, e bee si adịchaghị Fikiere mkpụrụ osisi. Adabara mbuaha akụ, herbal tii, blended cereal flakes, ice cream ịchọ mma na mmiri.
Akọrọ na nke na-adịghị nke nnyapade, mmiri na-enweghị nrụrụ, ọ bụghị ike na obere okpomọkụ, rehydration na-enweghị agba agba.
Mkpụrụ osisi na-adịghị mma dị mma maka nri n'ụbọchị, ma ọ bụ na-agbakwunye na nri ụtụtụ dị ka oatmeal na quinoa porridge. Mkpụrụ osisi nwere ike ịkpụchaa mkpa (apụl, unere, strawberries, kiwi), gbue n'ime obere iberibe (painiapulu, apụl), aka ekpe dum (raspberries, blueberries), ma ọ bụ kpochaa ma kpọnwụọ n'ime leathers mkpụrụ osisi.
Mkpụrụ osisi a mịrị amị nwere ike ịkwalite ụdọ gị na nri na-edozi ahụ ma nye ahụ gị nnukwu antioxidants.
Usoro ịmịkọrọ mmiri na-ejigide uru oriri na-edozi ahụ na mbụ. Dịka ọmụmaatụ, mkpụrụ osisi apụl ga-enwe otu kalori, protein, abụba, carbohydrate, fiber, na ọdịnaya shuga dị ka mkpụrụ osisi ọhụrụ.
Womenmụ nwanyị nwere ike irite uru dị ukwuu site na mkpụrụ osisi mịrị amị, ọkachasị ọkpụkpụ ha. Ọ bụ n'ihi na ọkpụkpụ ọkpụkpụ na-akụkarị ụmụ nwanyị karịa ụmụ nwoke.
Mkpụrụ osisi a mịrị amị nwekwara ike ime ka ahụike obi dịkwuo mma. Otu ounce nke mkpụrụ osisi a mịrị amị nwere ọtụtụ antioxidants na eriri karịa otu ounce nke mkpụrụ ọhụrụ. Ihe ndị a bụ akụkụ dị mkpa iji mee ka obi gị dị mma.
Cranberries a mịrị amị nwere ike inye aka igbochi mkpụkọ ọbara. Nke a nwere ike inye aka n'ime ka ọbara na-agbanwe agbanwe site n'obi n'oge niile
Orylọ Ọrụ Na-ahazi China Mkpụrụ Mịrị Mịrị, Pọọpọ echekwara, A na-eji nlezianya mee ngwaahịa ọ bụla, ọ ga-eme ka afọ ju gị. A na-enyocha ngwongwo anyị na usoro mmepụta nke ọma, n'ihi na ọ bụ naanị iji nye gị ezigbo mma, anyị ga-enwe obi ike. Nrụpụta dị elu na-akwụ ụgwọ mana ọnụahịa dị ala maka imekọ ihe ọnụ anyị ogologo oge. You nwere ike ịnwe nhọrọ dịgasị iche na uru nke ụdị niile bụ otu ihe a pụrụ ịtụkwasị obi. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, egbula oge ịjụ anyị.
Nke gara aga: Ezigbo Ogo Dehydrated Red Orange - Oroma Ọbara - Ihe Nketa
Mkpụrụ osisi akpọnwụwo
Ifriizi Akọrọ Mkpụrụ Mkpụrụ